तालिबानबाट बच्न १० वर्ष केटा बनेर बसिन् यी युवती, के थियो पहिचान मेट्नुपर्ने बाध्यता ? — Breaking News, Headlines & Multimedia
तालिबानबाट बच्न १० वर्ष केटा बनेर बसिन् यी युवती, के थियो पहिचान मेट्नुपर्ने बाध्यता ?
एजेन्सीः अफगानिस्तानमा तालिबानी शासन फर्किएको छ । तालिबानले आफ्नो पहिलो शासनकालमा महिलाहरुमाथि निकै ज्यादती गरेको थियो । महिलाहरुमाथि कैयौं किसिमका कडा प्रतिबन्ध लगाइएका थिए । यो प्रतिबन्धका कारण त्यहाँका महिलाहरुले निकै कष्टकर जीवन बिताउनुपर्यो । यस्तै कष्टकर जीवन बिताउने एक महिला नादिया गुलाम पनि हुन् । नादिया एक लेखिका हुन् ।